Cudurka Dabeysha Calendar
Dood: Wacyeglinta Dabeysha
Barnaamijka Wacyigalinta Dabeysha
Barnaamijka Wacyigelinta Dabeysha ee VOA waxa uu ka hadlayaa buubuuninta guulo horudhac ah waxa ay u dhimi karto dadaalka loogu jiro dabar goynta cudurka.
Barnaamijka Wacyigelinta Cudurka Dabaysha 8/10/2015
Maxaa dhaxal gal ah ama tusaale ah oo ay dadka la nool raadka cudurka dabeysha u reebi karaan jiilka mustaqbalka waa qodobka barnaamijka wacyigelinta dabeysha aad ku saabsanyahay.
Barnaamijka Wacyigelinta Cudurka Dabaysha
Barnaamijka Dabeysha ee todobaadkan waxa uu ku saabsanyahaydhibta ay la kulmaan dadka uu uu ku dhacay cudurka dabeysha
Dood Wacyigelinta Dabeysha Garowe
VOA ayaa kulan dood ah ku qabtay Garowe gaar ahaan wacyigelinta Dabeysha . Waxaa doodan daadihinaya ay wariyaheenna Nuux Muuse
Barnaamijka Wacyigalinta Dabeysha (18 May, 2015) Barnaamijka Wacyigelinta Dabeysha ee VOAda waxa uu ku saabsanyahay siyaabaha ay hey’adaha caafimaadka ee maamulada ka jira qeybo ka mid ah Somalia ay uga hortagaan faafista cudurka dadka qaxootiga ah iyo barakacayaasha.
Dood: Wacyigelinta Dabeysha
Barnaamijka Wacyigalinta Dabeysha (27 April, 2015)
Barnaamijka wacyigelinta dabeysha wuxuu ku saabsanyahay sida tallaalka iyo wacyigalinta dabayshu ay uga faa'idaysan karaan caruurta darbi-jiifka ah.
Barnaamijka Wacyigalinta Dabeysha (20 April, 2015)
Barnaamijka wacyigelinta dabeysha wuxuu ku saabsanyahay suurtagalnimada in ciidamada ka howl gala dhulka ay Somalidu degto ee Geeska Africa inay ka qeyb qaataan la dagaalanka cudurka dabeysha iyo ololayasha talaalka.
Dood Wacyigelinta Dabeysha ee Baydhabo
Barnaamijka Wacyigalinta Dabeysha (13 April, 2015) Barnaamijka Dabeysha ee todobaadkan waxa uu ku saabsanyahay Doorka Macalimiinta dugsiyada Quraanka ay ka qaadan karaan wacyigelinta cudurka dabeysha.